शनिबार, २७ असार २०७७, ०१ : ४५
हरिवंशको तलब एक सय ७५
एक समय काठमाडौँमा कलाकार जन्माउने चर्चित समूहको रुपमा भैरव नृत्य दललाई लिइन्थ्यो । भैरव नृत्य दलमा नृत्य कलाकारको रुपमा काम गर्दागर्दै हरिवंश आचार्यले जितेन्द्र महत ‘अभिलाषी’को सहयोगमा नाचघरमा नाटक खेल्ने मौका पाए ।
तीजे भयो कस्तो बरिलै !
तीजे अर्थात् तीजको समयमा गाइने पर्वगीत । समय क्रमसँगै हरेक क्षेत्र र पर्व मनाउने शैली परिवर्तन भइरहँदा तीज गीत गाउने शैली पनि परिवर्तन हुनु नौलो कुरो होइन । पर्वको मर्म नै परिवर्तन हुन थालेपछि त्यस्ता पर्वमा गाइने गीतका शब्द तथा भाव परिर्वतन हुनु पनि स्वाभाविक हो ।
नेपालमा ९० प्रतिशत फिल्म फ्लप हुन्छन् तर रमाइलो आँकडा के छ भने फिल्म फ्लप हुन्छन् । निर्माता डुब्छन्, रोइकराइ गर्छन् । यो क्षेत्रबाटै पलायन हुन्छन् । तर कलाकार बेस्सरी चल्छन् । पहिलो फिल्म रिलिज नुहँदै थप चार पाँच फिल्म साइन गरिसक्न भ्याउँछन् ।
४१ वर्षपछि नेपाली नाटकमा टिका
करिब ४१ वर्षपछि अभिनेता टिका पहारी नेपाली रंगमञ्चमा फर्कने भएका छन् । नेपालमा नाटक नगरेको ४१ वर्ष भएपनि भारतमा उनले ३६ वर्षअघिसम्म नाटक गरेका थिए । सुलक्षण भारतीको निर्देशनमा रिहर्सल भइरहेको नाटक ‘लाटीको छोरो’मार्फत उनी रंगमञ्चमा फर्कन लागेका हुन् ।
आर्यनको वास्तविक नाम ?
नायिका रेखा थापा आफ्नो ब्यानरबाट निर्मित चलचित्रमा अभिनय गर्ने हिरोहरुको नयाँ नामले ‘न्वारान’ गरिदिन निकै खप्पिस छिन् । रेखा फिल्म्सको ‘किस्मत’बाट ठूलो पर्दाका चलचित्रमा डेब्यु गरेका आर्यन सिग्देल सो चलचित्रमा अभिनय गर्नुअघि हरिश सिग्देलका नामले सडक नाटक, म्युजिक भिडियो र टेलिशृंखलाहरुमा अभिनय गर्थे ।
कान्छीलाई धोका !
एक समय नम्रतालाई फिल्म पाउनै धौ धौ थियो । म्युजिक भिडियो खेलेर चित्त बुझाइरहेकी थिइन् । तर ‘छक्का पञ्जा’को सानै रोल सही, उनको कमब्याकका लागि पर्याप्त रह्यो । त्यसैले त अभिनेत्री श्वेता खड्काले बनाउन लागेको फिल्म ‘कान्छी’ अफर गरिन् ।
‘ग्याङस्टर ब्लुज’बाट नेपाली रजतपटमा डेब्यु गर्न लागेका आशिरमान देशराजलाई ‘अपकमिङ’ स्टार भनेर फुक्र्याउने गरिएको छ । अझ, पहिलो फिल्म रिलिज नहुँदै १५ लाखमा ‘ब्रेकअप’ शीर्षकको फिल्ममा अनुबन्ध भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै उनीप्रतिको अपेक्षा बढेर गएको छ ।
चर्चामा रहँदा रहँदै हराएका कलाकारको कमब्याक बडो दुर्लभ हुन्छ । भारतका अमिताभ बच्चन सायद अपवादमा पर्छन् । नेपालमा होस् वा भारतमा कुनै पनि हिरो वा हिरोइनको कमब्याक सफल भएको देखिन्न ।
‘सुटिङमा बाङ्लादेशी कलाकारको नाकमुख फुट्यो...’
नेपाली साहित्य क्षेत्रमा प्रकाश आङ्देम्बे परिचित नाम हो । उनले भुटानी शरणार्थीको कथामाथि पहिलोपल्ट ‘देश खोज्दै जाँदा’ फिल्म निर्देशन गरेका छन् । फिल्म भदौ ८ गतेदेखि देशव्यापी प्रर्दशनमा आउँदै गर्दा प्रकाशसँग अनिल यादवले गरेको निर्देशन संवाद ।
नेपालको पहिलो फिल्म समीक्षक को ?
नेपालमा २००६ साल मंसीर २७ गतेदेखि सर्वसाधारणले समेत हेर्न पाउने गरी काठमाडौँ सिनेमा घर (जुन पछि जनसेवा सिनेमा हलका रुपमा चिनियो) निर्माण गरिएको थियो ।
माओवादीमा रेखाको राम्रै दबदबा थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सँगसँगै नाचेको इतिहास थियो । भाइटीका लगाएर माओवादी नेता सागर थापालाई दाइ बनाएकी थिइन् । प्रत्यक्षमा टिकट पाउन लागेको चर्चा थियो ।
सिनेसर्कलमा ‘जात्रा’लाई पाँच अवार्ड
राजधानीमा सोमबार सम्पन्न ‘सिने सर्कल एवार्ड–२०७४’मा फिल्म ‘जात्रा’ले उत्कृष्ट फिल्मसहित पाँच विधामा अवार्ड जितेको छ । फिल्मका लागि निर्देशक प्रदीप भट्टराई उत्कृष्ट निर्देशक र उत्कृष्ट पटकथा, विपिन कार्की उत्कृष्ट अभिनेता, वर्षा राउत उत्कृष्ट अभिनेत्री घोषित भए ।
भुवनको ‘सम्मान मेरो’
गायक भुवन सुप्तिहाङ राईले सांगीतिक करियरको पाँचौँ एल्बम ‘सम्मान मेरो’ श्रोतामाझ ल्याएका छन् । राजधानीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, म्याराथन धावक वैकुण्ठ मानन्धर, गीतकार बुद्धवीर लामा, सञ्चारकर्मी डब्बु क्षत्री लगायतले संयुक्त रूपमा एल्बमको सार्वजनिक गरे ।
‘ऋतु’बाट डेब्यु गरेयता मलिना जोशीले खाली त बस्नु परेको छैन तर उनको अभिनय रहेको फिल्मले न त उधुम व्यापार गरेका छन् न त उनको अभिनयले धेरैको ध्यान खिँचेको छ । यस्तोमा मलिनाको आशा फेरि एक पटक ‘संरक्षण’मा गएर टिकेको छ ।
सिपोराको कुबेलाको प्रेम
भलिबल छाडेर फिल्मको अभिनयमा लागेकी भलिबलको राष्ट्रिय टोलीकी पूर्व खेलाडी सिपोरा गुरुङ केही दिनअघि मात्र अधवैंशे व्यक्तिको प्रेममा परेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
पहिले गाईजात्रा हास्य कलाकारका लागि ठूलै पर्व हुन्थ्यो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने गाईजात्रा विशेष कार्यक्रमका लागि भ्याई–नभ्याई हुने हास्यकलाकारका लागि भने यस वर्ष भने ढुक्कसँग बस्ने वर्ष बन्न पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै गाईजात्रा भनेको हामी हास्य कलाकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चाड हो भन्नेहरु यस वर्ष चुपचाप छन् ।
मेरो हँसाउने टेक्निक
दीपकराज गिरी समसामयिक विषयवस्तुलाई रिलेट गरेर हसाउँछन् । मानिसलाई हँसाउन निकै अफ्ठ्यारो हुने बताउने गिरी समसामयिक विषयवस्तुमा व्यंग्य मिसाएर हँसाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै समयमा स्क्रिप्टका पात्र स्क्रिप्टमै रहन्छन् ।
अनि हास्यकलाकार भएँ..
१२ वर्षदेखि म कलाकार बन्ने कोसिसमा नै छु । यसका लागि म मिहिनेत गरिराखेको छु । मलाई सानैदेखि कलाकार बन्ने रुचि थियो । म आफ्नो प्रेरणाको स्रोत कृष्ण मल्ल, रमेश बुढाथोकी लगायतलाई मान्छु । यसपालि मेरो गाईजात्राको केही कार्यक्रम छैन ।
‘रानीमहल’मा प्रदीपलाई १५ लाख
फिल्म फ्लप हुँदा कति असर गर्छ, सुशील श्रेष्ठलाई हेरे भयो । बजारमा हिरोको अभाव भएर सौगात मल्ल र दयाहाङ राईकै भाउ बढेर १३ लाख छेउछाउ पुगिसक्यो तर ‘सायद २’ यता सुशीलले नयाँ फिल्म साइन गरेको खबर सार्वजनिक भएको छैन ।
सुशीलको डबल फ्लप
अनमोल केसीलाई ‘होस्टल रिटन्र्स’मा रिप्लेस गर्दा धेरैले सुशील श्रेष्ठलाई अनमोललाई समेत टक्कर दिने अभिनेता भनी चर्चा चलेको थियो । फिल्म हिट भएपछि चर्चालाई भरथेग नै भयो तर त्यसयता दुइटा फिल्म लगालग फ्लप भएपछि अनमोलसँगको टक्कर त परको कुरा सुशीलको करियर नै संकटमा परेको चर्चा सुनिन थालेको छ ।